waa masih Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: waa masih
Suuradda Al-Tawbah (Suuradah 9 – Toobad keena, Baafin) waxay soo keentaa dood maadaama ay ka hadleyso jihaadka, ama dadaalka. Aayada waxay ku siisaa hagitaan dagaalka sidaa darteed waxaa jira fasiraado kala duwan oo ay bixiyaan culimo kaladuwan. Aayad ka mid ah Surah At-Tawbah oo ka hadlaya arrintan waa:
baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culus kiinajahaada xoolihiinna iyo naftiinna wadada EEBE, saasaana idinka khayrroon hadaad wax ogtihiin. hadduu jiro muuqaal adduunyo oo dhaw iyo socdaal gaaban way ku raaci lahaayeen waxaase ku fogaaday socdaalkii, waxayna ku dhaaran Eebe haddaanu kari waan idinia bixi lahayn, waxayna halaagi naftooda Eebana waa ogyahay inay been sheegi.
Suuradda Al-Tawbah 9: 41-42
Canaanta ku jirta Al-Tawoba 42 ayaa imaaneysa hadii safarka dagaalka uu sahlanaan lahaa waay raaci lahaayeen, laakiin kuwa doonaya inay ‘ dadaalaan’ waa la waayaa markii ay ku adkayd. Aayadda guuleysha waxay qortay marmarsiinyo iyo dood ku saabsan dadkan taageerayaasha badhkood ah. Suuradda Al-Tawbah ayaa siinaysa xusuusintan
Suuradda Al-Tawbah 9:52
Taladu waxay timaadaa maxaa yeelay caadiyan waxaa jira laba naliijooyin oo suurtagal ah: Dhimasho (Shahiidnimo) ama guul. Laakiin maxaa dhacaya haddii halganku aad u weyn yahay oo naliijooyinka LABAAD ay yimaaddaan – waa shahiidnimo iyo guul. Kani wuxuu ahaa halganka uu Masiixa uu la kulmay safarkiisa dheer ee uu ku tegay Yeruusaalem – imaatinkiisa halkaasna waxaa ku xardhan bisha ama hilal dayaxa si uu u fuliyo waxsii sheegyada boqolaal sano ka hor ay soo saareen nebiyadii Axadigii hore.
Suuradda Al-Isra (Suuradda 17 – Saarkii Habeen) waa la yaqaanaa maadaama ay sharraxeyso safarka habeenka ee Nabiga Maxamed PBUH, halkaas oo uu kaligii ka yimid Maka isagoo habeenkaa saaranaa Burqeeqo duulaysa.
Suuradda Al-Israa17: 1
Ciise Maxiix wuxuu u socday isla meeshii saxda ahayd ee Socodkii habeen. Laakiin Ciise Masiix wuxuu lahaa ujeeddo ka duwan. Halkii lagu tusi lahaa calaamadaha, Ciise Masiix wuxuu galay Yeruusaalem si uu u muujiyo calaamadaha. Markaa wuxuu soo ifbaxay maalinimadii halkii habeenkii, oo wuxuu dameer fuushanaa halkii Bureeada. In kasta oo aynaan u maleynaynin in sidii cajiibka ahayd ee uu ku yimid bureeqo baala leh leh, imaatinkiisa ​​Yeruusaalem ee macbudka maalintaas uu saarnaa dameerkawaxaay calaamad cad u ahayd dadka. Waxaan sharaxaynaa sida.
Ciise Masiix wuxuu shaaca ka qaaday hadafkiisii ​​isagoo kicinaya Laasaros oo uu nool yahay haddana wuxuu safarkiisa u aaday Yeruusaalem (Al Quds). Qaabka uu ku imaan lahaa ayaa la sii sheegay boqolaal sano kahor. Waxaana sidan ku :
13 waxay qaateen laamihii geedaha timirta ah, oo ay baxeen inay ka hor tagaan, iyagoo ku dhawaaqaya Hoosanna, waxaa barakaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya oo boqorka Israa’iil ah.
Yooxanaa 12: 12-19
Galitaanka Ciise Masiix – sida laga soo xigtay Daawuud
Laga soo bilaabo Daawuud , boqorradii hore ee Yuhuudda waxay sanad walba fuulayaan fardahooda boqortooyo oo waxayna dadka u horseedi jireen Yeruusaalem. Ciise Masiix ayaa dhaqankan dhaqan geliyey markii uu soo galay Yeruusaalem isagoo dameer fuushan maalintii loo yaqaanay Axadii timirta. Dadku waxay Ciise Masiix Sabuuradda sidii ay u sameeyeen Daa’uud:
25 Rabbiyow, waan ku baryaynaaye, haatan na badbaadi, Oo waan ku baryaynaaye, Rabbiyow, haatan barwaaqo noo soo dir.
26 Waxaa barakaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya, Waxaannu idinka ammaannay guriga Rabbiga.
27 Rabbigu waa Ilaah, oo wuxuu na siiyey iftiin, Allabariga xadhko ku xidha tan iyo meesha allabariga geeseheeda.
Sabuuradda 11: 25-27
Dadku waxay ku gabyeen Sabuuraddan qadiimka ah oo loo qoray boqortooyadii waayo waxay ogaayeen inuu Ciise sara kiciyey Laasaros, sidaa darteedna waxay ku farxeen markuu yimid Yeruusaalem. Eraygii ay ku qaylinayeen, ‘Hoosanna’ macnaheedu waa ‘badbaado’ – oo sidii Saabuuradii 118: 25 loo qoray. Muxuu ka badbaadin lahaa? Nebi Sekaryaah wuxuu inoo sheegayaa.
Galitaanka waxaa sii sheegay Sekaryaah
In kasta oo uu Ciise Masiix dib-u-dejinayo wixii ay boqorradii hore boqolaal sano ka hor u sameeyeen, haddana si ka duwan ayuu u sameeyey. Nebi Sekaryaah , oo wax ku sii sheegay in Masiixa imaanayoMagaciisa,Haddana sidaasoo kale sii sheegay in Masiixaa uu Yuurasalem ku soo gali doonto dameer. Jadwalku wuxuu muujinayaa nabi Sakariyaas taariikhda, oo ay la socdaan nebiyo kale oo saadaaliyay dhacdooyinka Axadii Timirta.
Nebiyadii hore ayaa arkay inuu Ciise soo galayo Yuurasaalem Axadii Timirta.
Qayb ka mid ah wax sii sheegiddaas ayaa laga soo xigtay Injiilka Yooxanaa ee ku qoran qoraalka buluugga ah. Sakariyaa Wax sii sheegiddiisa ayaa ku soo gabagabedyay halkan:
10 Oo anigu Efrayim gaadhifardood kasta waan ka baabbi’in doonaa, oo Yeruusaalemna faras kuma reebi doono, oo qaansada dagaalkana waa la baabbi’in doonaa. Isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa, oo dowladnimadiisuna waxay gaadhi doontaa bad ilaa baddeeda kale, iyo tan iyo Webiga iyo xataa dhulka darafyadiisa.
Waa Sekariyaah 9: 9-11
Boqorkan uu Sakariyaah wax ka sii sheegay ayaa ka duwnayd Boqortooyadii kale. Isagu boqor uma noqon doono isagoo adeegsanaya ‘gaadhifardood’, Falaadh dagaal ‘iyo’ qaansada dagaalka ‘. Xaqiiqdii, Boqorkani wuxuu baabi’in doonay hubkaas, bedelkoodana wuxuu ‘umadda ugu dhawaaqi doonaa nabad’. Si kastaba ha noqotee, Boqorkani wuxuu ku qasbanaaday inuu la halgamo sidii looga adkaan lahaa cadowga. Wuxuu ku dadaalaa sida jihaadka ugu weynaa.
Waay iska cadahay boqorkan cadaawaha uu wajahi doono. Caadi ahaan, boqorkan cadowgiisa waa boqor kale oo ka soo jeedo qaran kale ka soo horjeedda, ama ciidan kale, ama kacdoon dadkiisa ka yimid, ama dad isaga ka soo horjeedda.
Laakiin nebi Sekaryaah wuxuu qoray in Boqorka lagu muujiyey dameer isla markaana ku dhawaaqaya nabad ‘inuu’ maxaabiista ka furan doono ceel-biyoodka ‘(aayadda 11). Booska ‘godku’ wuxuu ahaa habka Cibraaniga lagu tilmaamo qabriga, ama dhimashada. Boqorkani wuxuu sii deyn doonaa maxaabiista, oo aan ka kicin kuwa kalidii taliyeyaasha ah, siyaasiyiinta musuqmaasuqa ku dhacay ama ku xirnaa xabsiyada dadka lagu sameeyay, laakiin kuwaas ah ‘maxaabiista’ dilka. 
Markaan ka hadaleyno ka badbaadinta dadka geerida waxaan ula jeednaa badbaadiye qof sidaa darteed geerida waa la joojiyaa.waa laga yaabaa. Tusaale ahaan, waxaan badbaadin karnaa qof haraad u dhimanaya, ama siin kara daawo oo ka badbaadiya nolosha qof. ‘badbaadin’ wuxuu dib u dhigaa geerida sababta oo ah qofka badbaada ayaa mar dambe dhiman kara. Laakiin Sekariyaah ma uusan sii sheegin wax sii badbaadinta dadka ‘dhimashadii’ laakiin wuxuu ku saabsanaa samato bixinta kuwa dhimashada lagu xukumay – kuwa horey u dhintay. Boqorka soo fuushan dameer uu wax ku sii sheegay Sekaryaah wuxuu ahaa inuu wajaho oo uu dhinto laftiisa isagoo maxaabiista sii daaya. Tani waxay u baahan tahay dadaal aad u weyn – jihaad aan waligiis horay loo arag. Aqoonyahanada ayaa mararka qaar tixraaca ‘jihaadka weyn’ ee halgankayaga gudaha iyo ‘jihaadka ka yar’ halgankayaga dibadeed. Marka laga hor tago ‘godka’ Boqorka wuxuu marayaa labadaas halgan ama jihaadka.
Hubkee ayuu boqorku u isticmaali doonaa jihaadkaan ama la halgamaya dhimashada? Nebi Sekaryaah wuxuu qoray in Boqorkan kaliya uu qaadayo “dhiiggii axdigaygii aan kula jiray” dagaalkiisii ceelka. Dhiigiisa isagu wuxuu noqon lahaa hubka kaas oo wajihi lahaa dhimasho. Ciise Markii uu dameer ku soo galay Yuurasalem Ciise wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay Boqorkan – Masiixa.
Ciise Muxuu ogu ooyay murugo
Axaddii Timirta Ciise markii uu Yeruusaalem ( sidoo kale waxaa loo yaqaanay Galitaanka Guusha) hoggaamiyeyaasha diinta ayaa ka soo horjeestay isaga. Luukos wuxuu sharxayaa jawaabta Ciise Masiix ee ka soo horjeedda mucaaradkiisa.
Ciise Masiix wuxuu si gaar ah u yiri waa in hogaamiyayaashu ‘aqoonsan lahaayeen waqtiga Ilaah imanayo’ ‘oo maanta ah’. Muxuu ula jeeday? Maxaa seegay iyaga?
Nebiyadu waxay sii sheegeen “Maalintii”
Qarniyo kahor Nebi Daanyeel (PBUH) wuxuu sii sheegay in Masiixa uu imaan doono 483 sano ka dib amarkii dib u dhiska Yeruusaalem. Waxaan xisaabinaynaa sanadka Daniel ee la rajeynayo inuu noqdo 33 AD – sanadkii uu Ciise masiix dameer ku galay Yeruusaalem. Saadaalinta sanadka soo galitaanka, boqolaal sano kahor inta aysan dhicin, waa wax lala yaabo. Laakiin waqtiga waxa la xisaabin karaa ilaa maalinta. (Fadlan marka hore dib u eeg isla marka e aan ku dul dhisno).
Nebi Daanyeel wuxuu saadaaliyay 483 sano isagoo isticmaalaya 360-maalmood sanad kahor muujintii Masiixa. Marka loo eego, tirada maalmaha waa:
483 sano x360 maalmood oo sanadkii ah = 173880 maalmood
Marka laga hadlayo jadwalka taariikhda caalamiga ee casriga ah oo leh 365.2422 maalmood / sannadkiiba tanina waa 476 sano oo leh 25 maalmood oo dheeri ah. (173 880 / 365.24219879 = 476 oo ka harsan 25)
Goormay ahayd amarkii dib u soo celinta Yeruusaalem ee bilaabatay tirintaas? Waxaa lasiiyay:
Bishii Niisan oo ahayd sannaddii labaatanaad eoo Boqor Artaxshata sida ku qoron
Nexemyaah 2: 1
Waa maalinkee maalinta Nisan (Waa bil ah taariikda Yuhuuda) aan la siinin, laakiin Niisan 1 ayaa loo badinayaa inay soo bilaabato sanadka cusub, sababtaas oo ah Boqorka wuxuu Nexemyaah xafladda. Niisan 1 sidoo kale waxay xusi doontaa dayax cusub maadaama bilooyinku ahaayeen dayax (sida taariikhda islaamka). Bilaha cusub ayaa lagu go’aamiyay hab dhaqameedka muslimiinta – iyadoo rag la aqoonsan yahay ay indha indheeyaan bisha cusub (hilal) ee dayaxa.
Ayadoo la adeegsanayo cilmiga xiddigiska casriga ah waxaan ognahay goorta dayaxa cusub ee lagu xusayo Niisan 1, 444 BC markii ugu horreysey ee la arkay. Dhibaatada ayaa ah in la ogaado haddii bisha ugu horeysa ay dhab ahaan u arkeen kuwa indha indheeya maalintaas ama haddii la waayey iyo bilowga Niisan uu dib u dhacay hal maalin. Xisaabinta xidigiska ayaa dhigaysa bisha dayaxa ee bisha Niisan 1 ee sannaddii 20-aad ee boqortooyadai reer Faaris Artaxerxes markay ahayd 10 PM taariikhdu markay ahayd 4-ta Maarso, 444 BC taariikhda kalandarka casriga ah . Haddii muuqaalka furfuran la seegay, Nisan 1 wuxuu ahaan lahaa maalinta ku xigta Maarso 5, 444 BC. Si kastaba ha noqotee, amarkii reer Faaris ee ahaa in dib loo soo celiyo Yeruusaalem waxaa la soo saari lahaa Maarso 4 ama Maarso 5, 444 BC.
Ku darista 476 sano ee Daanyeel waqtigii la sii sheegay ilaa maanta waxay na keenaysaa bisha Maarso 4 ama 5, 33 AD. (Sanad ma jiro 0, jadwalka casriga ah wuxuu soconayaa 1BC illaa 1 AD hal sano gudaheed sidaa darteed xisaabta waa -444 + 476 + 1 = 33). Ku darista 25ka maalmood ee hartay ee Daniel ee waqtiga la sii sheegay ilaa Maarso 4 ama 5, 33 AD waxay na siineysaa 29 ka Maarso ama 30, 33 AD, oo lagu muujiyey jadwalka hoose. Maarso 29, 33 AD, waxay ahayd Axadda – Axadda Timirta – isla maalinta uu Isa PBUH soo galay Yeruusaalem dameerkii isagoo sheeganaya inuu yahay Masih. Waan ognahay tan maxaa yeelay Jimcaha soo socdaa wuxuu ahaa Kormaridda – oo Kormaristu had iyo goor waxay ahayd Niisan 14. Niisan 14 ee 33 AD waxaay ahayd Abriil 3. Ahaanshaha 5 maalmood kahor Jimcaha 3-da Abriil, Axadda timirta ayaa ah Maarso 29.
Markii uu soo galay Yeruusaalem bishii Maarj 29, AD, Ciise Masiix isagoo dameer fuushan, wuxuu fuliyay wax sii sheegiddii Sekaryaah iyo Wax sii sheegiddii Daanyeel – ilaa maanta.Tan waxaa lagu muujiyey jadwalka hoose.
Daanyeel wuxuu saadaaliyay 173 880 maalmood ka hor intaysan shaaca ka qaadin Masiixa; Nexemyaah ayaa bilaabay wakhtigaas. Waxay ku soo gabagabowday bishii Maarj 29, 33 AD markii Ciise soo galay Yeruusaalem axadda Timirta
Waxsii sheegyadaas badan oo la fuliyay maalmaha waxay muujinayaan calaamadaha muuqda ee Eebbe u adeegsaday inuu ku muujiyo qorshihiisa ku saabsan Masiixa. Laakiin markii dambe isla maalintaas Ciise Masiix ayaa fuliyay wax sii sheegid kale oo ka timid Nebi Muuse . Markii uu sidaas samaynayay wuxuu dhaqaaqay dhacdooyinka horseedi kara jihaadkiisa ‘Ceelka’ – ee cadowgiisa dhimashada. Waxaan eegnaa tan xigta.
 Tusaalooyin qaar ka mid ah oo ku saabsan sida ‘Ceelka’ loola jeedo ee dhimashada nebiyada:
15 Laakiinse waxaa lagu dejin doonaa She’ool, iyo meelaha ugu hooseeya ee yamayska.
Ishacyaah 14: 15
18 Waayo, She’ool kuguma mahadnaqi karo, oo dhimashaduna kuma ammaani karto, Oo kuwa yamayska hoos ugu dhacana runtaada rajo kama qabi karaan.
Ishacyaah 38: 18
22 Hubaal naftiisu waxay ku dhow dahay yamayska, Oo noloshiisuna waxay ku dhow dahay kuwii baabbi’in lahaa.
Ayuub 33: 22
8 Yamayskay kugu ridi doonaan, oo waxaad u dhiman doontaa sida dhimashadii kuwii badaha dhexdooda lagu laayay oo kale.
Yexesqeel 28: 8
23 Qabuurahoodu waxay ku yaalliin yamayska meelaha ugu hooseeya, oo guutadiisuna waxay ku wareegsan tahay qabrigiisa. Kuwii dalka kuwa nool cabsigelin jiray oo dhan waa la wada laayay, oo seef bay ku le’deen.
3 Rabbiyow, waxaad naftaydii kor uga qaadday She’ool, Oo waad i sii noolaysay si aanan yamayska ugu dhicin.
Sabuurradii 30: 3
 Isweydaarsiga ka dhexeeya jadwalka taariikhiga iyo ta casriga ah (tusaale ahaan. Niisan 1 = Maarj 4, 444BC) iyo xisaabinta bilaha cusub ee qadiimiga ah waxaan u isticmaalaa shaqada Dr. Harold W. Hoehner, Raadinta Taariikhda ee Nolosha Masiixa. 1977. 176pp.
Author [email protected]Posted on 06/11/2020 06/03/2021 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags at-tawbah 41, gelitaanka Ciisa al Masih ee Qudus, gelitaanka Ciisa al Masih ilaa al quds, Injiil ayaa shaaca laga qaaday Tagsat-tawbah, isa al masih dameer, isa al masih waxsii sheegyada, nebi zakari iyo ciise al masih, suurat tawbah, timir axad, waa masih